Akpesa Witch si Andover na Salem Witch Trials, 1692
A maara maka: ebubo nke amoosu, jidere ma tụọ ya mkpọrọ na ọnwụnwa aka ọjọọ nke Salem 1692
Ogologo oge nke ule ndi amoosu Slem: banyere 55
Oge: banyere 1637 rue October 27, 1710
A makwaara dịka: Mary Clements Osgood, e dekwara Clements dị ka Clement
Meri Clements Osgood lụrụ John Osgood Sr., onye aha ya pụtara na ụfọdụ n'ime ihe ndekọ na gburugburu ọnwụnwa nke ndị amoosu Salem. John Osgood nwere nnukwu ala na Andover ma bụrụ onye na-aga nke ọma.
Di na nwunye a nwere ụmụ iri na atọ: John Osgood Jr. (1654 - 1725), Mary Osgood Aslett (1656 - 1740), Timothy Osgood (1659 - 1748), Lydia Osgood Frye (1661 - 1741), onye uwe ojii Peter Osgood (1663 - 1753) , Samuel Osgood (1664 - 1717), Mehitable Osgood Poor (1671 - 1752), Hannah Osgood (1674 - 1674), Sarah Osgood Perley (1675 - 1724), Ebenezer Osgood (1678 - 1680) , Clarence Osgood (1678 - 1680), na Clements Osgood (1680 - 1680).
Tupu ọnwụnwa nke Salem Witch
Anyị enweghị ntakịrị ihe ọmụma na-abụghị ihe ndekọ obodo nkịtị maka Mary Osgood tupu afọ 1692. A mụrụ ya n'England, na Warwickshire, wee bịa Andover, Massachusetts n'ógbè, n'ihe dịka n'afọ 1652. Na 1653, ọ lụrụ John Osgood Sr. nke a mụrụ na England , na Hampshire, bịarute Massachusetts n'ihe dịka afọ 1635. Ha nwere ụmụ iri na atọ.
Ebubo na Ịgba Aka
Mary Osgood bụ otu n'ime ụmụ nwanyị Andover ndị e jidere na mmalite September, n'afọ 1692.
Dika akwukwo ajuju siri ju ugbua, abiara umuaka umuaka abuo na Andover ka ha choo oria Joseph Ballard na nwunye ya. A na-ekpuchi ndị bi n'ógbè ahụ, gụnyere Mary Osgood, ma mee ka ha bikwasị ndị nọ n'ahụhụ aka. Ọ bụrụ na ụmụ agbọghọ daa adaba, e jidere ha.
Meri Osgood, Martha Tyler, Deliverance Dane , Abigail Barker, Sarah Wilson na Hannah Tyler bugara n'obodo Salem, ma lee ya anya ozugbo ma gbaa mbọ ikwupụta. Ihe ka ọtụtụ. Mary Osgood kwupụtara ikwenye Martha Sprague na Rose Foster, na arụmọrụ ndị ọzọ, tinyere ndị ọzọ, gụnyere Goody Tyler (ma ọ bụ Martha ma ọ bụ Hana), Deliverance Dane na Goody Parker. O tinyere Patrick D. Dean, onye a na-ejidebeghị.
Na-alụ ọgụ maka ntọhapụ
Nwa ya nwoke, Peter Osgood, bụ onye uwe ojii, onye ya na di Mary, bụ Captain John Osgood Sr., nyeere aka ịchụso ikpe ya ma wepụta ya.
On October 6, John Osgood Sr. sonyere Nathaniel Dane, di nke Deliverance Dane , iji kwụọ ụgwọ 500 pound maka ịhapụ ụmụ abụọ nke nwanne Netiel, Abigail Dane Faulkner. N'October 15, John Osgood Sr. na John Bridges kwụrụ ụgwọ nke 500 pound maka ntọhapụ nke Mary Bridges Jr.
Na Jenụwarị, John Osgood Jr. jikọtara ya na John Bridges, na-akwụ ụgwọ nke 100 pound, maka ntọhapụ nke Mary Bridges Sr.
N'ime akwụkwọ mkpesa, nke a na-edeghị akwụkwọ, ma eleghị anya site n'ọnwa Jenụwarị, ihe karịrị 50 arịrịọ agbata obi Andover na-arịọ maka Mary Osgood, Eunice Fry, Deliverance Dane , Sarah Wilson Sr., na Abigail Barker, na-agba akaebe na ha amaghi ikpe na ikwesị ntụkwasị obi ha.
Mkpesa ahụ kwusiri ike na nkwupụta nkwupụta ha mere nrụgide ma ghara ịtụkwasị obi.
N'ọnwa nke afọ 1703, e tinyere akwụkwọ ọzọ maka Martha Osgood, Martha Tyler, Deliverance Dane, Abigail Barker, Sarah Wilson na Hannah Tyler, ka ha wee nweta ihe mkpuchi ha.
Mgbe Ọnwụnwa ahụ gasịrị
Na 1702, nwa Mary Osgood, Samuel, lụrụ Deliverance Dane ada Hannah.
Ebumnobi Ka E Jide Ya
E boro ya ebubo na otu ìgwè ndị inyom si Andover. O nwere ike ịbụ na a na-ele ha anya maka akụ na ụba ha, ikike ma ọ bụ ihe ịga nke ọma n'obodo, ma ọ bụ n'ihi na ha na Rev. Francis Dane na-akpakọrịta (nwunye nwa ya Deliverance Dane nọ n'ime ìgwè ahụ ejidere ma nyochaa ọnụ).
Ọ pụtaghị na egwuregwu Arthur Miller.
Salem, usoro usoro isiokwu nke 2014
Enweghị ọrụ a na-akpọ Meri Osgood na ọgwụgwọ a.
Mirabai (Mira Bai), Bhakti Saint na Poet
Ida Tarbell: Onye na-ede akụkọ banyere Muckraking, Nkọwa nke Ike Njikọ
Jane Seymour - nwunye nke atọ nke Henry nke Asatọ
Elizabeth Key na History History-Changing Ikpe
Ọdịiche Dị n'etiti Iwu Na-ahụ Maka Iwu na Iwu Dị Mkpa
Ihe Ngwurugwu Na-atọ Ụtọ Na-atọ ụtọ
Mahadum nke Admissions nke Michigan
Explorer Panfilo nke Narvaez Chọta Disaster na Florida
The Top 10 Best Old Dance Dance na Crazes
Umu Okpukpo: Ihe Ha bu na ihe mere ufodu ndi ogba egwu jiri ha
Ọnwụ nke usoro Ming na China, 1644
Sunspots! Kedu ebe ndị a gbara ọchịchịrị na anyanwụ?
Ndị Rom Gladiators
Ọgụgụ Pọmba nke Bodhisattva
Amaokwu Baịbụl Banyere Ndị Nne na Nna
Iji Kwụsị Nduzi Ọmụmụ Mockingbird
Ncheta Oké Mgbukpọ nke New England na Boston
Amụma Na-akwụsị Ọgwụ
Nchọpụta nke Higgs Ubi
Ụdị Nhọrọ Ndị Nhọrọ - Nhọrọ Nhọrọ
SAT Scores maka Ịbanye na Pennsylvania Pennsylvania ụlọ akwụkwọ
Top Ụlọ Tantra Ten
Otu esi eme ka slime
Point Atụmatụ: Gịnị Bụ Ya na Mgbe Iji Jiri ya
Ugbo ala na-ebu ụgbọ elu
10 Ngwurugwu ndi ozo di iche iche nke na-adaba na dinosaur-dika uzo
Kedu ihe bụ Epizeuxis
Otu esi ejikọta 'ude' (iji melee)
Oké Osimiri Tropical